SAFIF Ambavahadimitafo – avril/mai 2015 – FJKM Ambavahadimitafo SAFIF Ambavahadimitafo – avril/mai 2015 |
Nohon’ny fahasoavan’Andriamanitra dia tanteraka soa aman – tsara ny fiofanana izay notanterahin’ny SPAA ho an’ireo mpiandry eo ambanin’ny fiahiany. Ny fiofanana moa dia notanterahina ny alarobia 22 sy ny alakamisy 23 aprily tao amin’ny fiangonana Andavamamba Kristy Velona. Ireo toro – lalana sy fampianarana izay natao ho vatsy entin’ny mpiandry hanatanterahiny ny asa fanompoana no tena notsindriana nandritra izany fiofanana izany.
Ho an’ny SAFIF – Ambavahadimitafo manokana moa dia ny volana aprily 2015 no nanatanterahin’izy ireo ny sakafo izay natao ho solom – bokatra, fanao isan – taona, ary notanterahina ao amin’ny Restaurant Sonasi (Andravoahangy Ambony).
Ireto avy kosa ny tetik’asa izay mbola miandry ny Sampana amin’ny volana may 2015 :
Ny faha – 10 may 2015 aorianan’ny fotoam – pivavahana no hanatanterahana ny fifidianana izay ho birao vaovao indray hitantana ny Sampana mandritra ny efa – taona manaraka.
Ny faha – 10 may 2015 ihany fa ny tolakandro kosa indray no hikarakaran’ny Sampana Fifohazana ny famelabelaran –kevitra arahina adi – hevitra eo amin’ny trano Fiangonana ka hanasana indrindra ny zatovo sy ny tanora.
Tiana ny mampahatsiahy fa miisa eo 16 ny mpiandry miasa eto Ambavahadimitafo amin’izao fotoana izao. Ary dia hisaorana Andriamanitra satria dia miasa tokoa ny Fanahy Masina satria dia miisa 4 ireo izay efa miomana ao amin’ny Sefala (Toeram – piofanana ho an’ny olona te – hirotsaka hanao ny asan’ny Mpiandry sy Mpitory Teny ary ny Katekista ) amin’izao fotoana izao.